Galmada - Youmo
Sex - somaliska
Meniiga hoose waxaad ka heleysaa qoraallo, sawirro iyo filimaan ku saabsan galmada.
Filim: Sida loo gashado kondom
Hi! Hadda waxaad daawaneysaa sida loo gashado kondom. Fur baakadda adoo isticmaalaya qeybta kore ee caagga ku jirta. Ka taxadar inaad kondomka ku jeexdid ciddiyahaada. In yar kondomka bannaanka u saar si aad u ogaatid meesha kor soo mareysa.
Waxyaalaha kahortagga uurka
Su’aal: Waxaan ka fekerayaa in ay gabdhaha iyo wiilasha si isku mid ah u dareeman galmada si isku mid ah
Su’aal: Ma qasab baa inaad 15 jir ahaatid si aad galma u sameysid?